माईतीले दिएको सुन बेचेर खोलिन् वर्कशप, ४३ बर्षिय सरस्वति यसरी बनाउँछिन् थरी-थरीका मोटरसाईकलहरु (भिडियो सहित) – Khabar Patrika Np
माईतीले दिएको सुन बेचेर खोलिन् वर्कशप, ४३ बर्षिय सरस्वति यसरी बनाउँछिन् थरी-थरीका मोटरसाईकलहरु (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २८, २०७७ समय: १:०८:०४
गरे के हुन्न र नेपालमा ? अलि कत्ति लगानी अनि मेहनत त्यसपछि धैर्यता, बस् यत्ति भए सम्भवत खाडीमा हुने कमाई नेपालमै हुन्छ । यसको ज्वालान्त उदारण हुन् काठमाण्डौं रातोपूलकी आशिष मोटरसाइकल वर्कशपका संचालिका सरस्वति सुवाल ।सुरुमा माईतीबाट पाएको सुन बेचेर खोलिएको उनको यो वर्कशप अहिले मज्जाले चलिरहेको छ । नयाँ शाखाको सोचमा रहेकी सरस्वति आफ्नो कमाईमा सन्तुष्टि पनि छिन् । त्यसो त यो व्यवसाय कत्तिको सहज छ त ? हेर्नुहोस् यो भिडियो अन्र्तवार्ता…
यो पनि -स्व. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको साथी कलाकार सँगम भण्डारी मिडियामा । श्रीको वास्तविक कथा बताउँदै श्वेता खड्कालाई यस्तो भनिन (भिडियो हेर्नुस)
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी पुरो कलाकार हुन्, सँगम भण्डारी । रेडियो न्पालमा बाल कार्यक्रममा नाटक प्रस्तुत गर्दै यस क्षेत्रमा बिगत लामो समयदेखि क्रियाशिल सँगम काभ्रैकी हुन् । परिवारर समाजले यस क्षेत्रमा आउन रोक लगाउने र साथ, हौसला नदिने त्यो समयदेखि यो समयसम्म क्रिाशिल सँगमले थुप्रे चलचित्र र टेलि चलचित्रहरुमा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरेकी छिन् । तलहरी चलचित्रबाट चलचित्र यात्राको थालनी गरेकी उनले राजेश हमालको आमाको भुमिकादेखि अन्य धेरै चलचित्रहरुमा नकारात्मक चरित्र पनि बहन गरेकी छिन् ।